Global Voices teny Malagasy » Japana: ravan’ny antontan’isa farany ny anganon’ny fandrosoana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Oktobra 2009 20:24 GMT 1	 · Mpanoratra Scilla Alecci Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Japana, Fitantanam-pitondrana, Toekarena sy Fandraharahàna, Vonjy Voina
Japoney iray amin'ny enina no miaina ao anatin'ny fahantrana araka ny tatitra  [teny anglisy] navoakan'ny minisiteran'ny raharaha sosialy. Araka ny antontan'isa  navoakan'ny OCDE [en], dia manana ny iray amin'ny tahan'ny fahantrana ambony indrindra amin'ny tany mandroso i Japana ka fahaefatra aorian'i Meksika, Torkia ary i Etazonia.
Tao amin'ny Flickr id: Ushio Shugo
Efa navoitran'ny sekretera jeneralin'ny sampan-draharahan'ny ady amin'ny fahantrana  (反貧困 Han Hinkon) [ja] Makoto Yuasa ny olana mikasika ity fahantrana ity tamin'izao fomba fitenenana manaraka izao [en]:
Hatramin'ny iakaran'ny fiharian-karena niatomboka tamin'ny taompolo 1960 no nametrahan'i Japana ny angano fa sarangan'olona antenantenany avokoa ny Japoney rehetra. Ny fomba fiasan'ny Japoney, fototr'izany angano izany anefa dia niova noho ny fitomboan'ny asa tsy manara-penitra sy ny singa maro samihafa, ka dia nitombo isa ny Japoney niaina tao anaty fahantrana.
Tsy vaovao mihitsy anefa, raha jerena ny adihevitra any amin'ny bolongana, ny elanelana misy eo amin'ny lafiny fidiram-bola any Japana. Raha vao vaky ny balônina ekonomika tamin'ny fiandohan'ny taompolo 90 dia niseho ny fahalemen'ny rafitra Japoney ary hatramin'izay fotoana izay no nilazan'ny manampahaizana maro fa tsy mbola tafarina ry zareo hatramin'ny fitotongan'ny toe-karena.
Ysaki nanoso-kevitra  fa efa nisy hatramin'ny ela ity olana ity saingy maro ny Japoney no nieritreritra azy ho olan'ny hafa.
Rehefa namaky ny vaovao aho, nahatsapa ny olana ho mifanahaka tanteraka amin'ny an'ireo vondrona voavakavaka eto Japana aho.
Nefa tena misy mihitsy ny olana sady efa tena manakaiky dia akaiky antsika na dia odian-tsy hita aza, mandresy lahatra ao anaty ao isika fa tsy misy idirantsika izany.
Miyabi-tale mihevitra  fa manana tantara lava ity lohahevitra ity ary tsy maintsy misy ifandraisany amin'ny tsy fihontsonan'ny politika.
Ny manaitra dia ny filazan'ny antontan'isa roa taona lasa izay fa olona iray amin'ny fito no miaina ao anaty fahantrana. Dia mbola misy ny sasany mihevitra izany ho mbola tsara ihany satria nisy ny fitotongana lalina nianjady tamin'izao tontolo izao noho ny fintraikan'ny nahabankirompotra ny Lehman Brothers, mba ny iray amin'ny olona dimy ihany aza no mahantra.
Nandritra ny fitondran'ny LPD, no nampisaina ny fomba fiteny toy ny ‘Tsy misy fahantrana eto Japana’ sy ny ‘mitotaly zato tapitrisa ny ankohonana ao amin'ny saranga antenantenany’ saingy miharihary indray fa lavitry ny marina izany.
 Flickr id: caribb
Misy kosa ireo misafidy ny hijery amin'ny lafiny hafa.
Ukkii ohatra manantena  fa hamerina any amin'ny fahatanjahan'ny fanahy nampalaza ny mponina Japoney indray izao fotoana maizina andalovana eo amin'ny tantaran'i Japana eo amin'ny lafiny sosialy sy toe-karena izao.
Avela handeha tahaka izao fotsiny ve izy ity mandrapahazoan'ny toe-karen'ny firenena aina indray?
Fony nahantra ny Japoney taorian'ny ady, dia niezaka nanao ny tsara indrindra araka izay tratry ny ainy tsy nisy fisalasalana mba hanatsara ny toe-draharaha tahaka ny iainantsika amin'izao fotoana izao.
Raha mba manana ny HETAHETAM-PANAHY tahaka ny tamin'izany fotoana izany isika dia matoky aho fa na dia tsy mahaova ny firenena ao anatin'ny indray mipi-maso aza, dia mbola azo heverina hatrany ny hampatanjaka ny orinasantsika sy haha-tsy mena-mitaha azy anaty fifaninanana.
mpiasa tsotra aho saingy miezaka ny hanana fomba fijerina PDG satria raha mitsinjo lavitra isika, maro ny zava-karohina sy ezaka mbola tratrarina, izay azo ampiharina amin'ny zavatra maro.
Efa adino angamba izany andian-teny hoe ‘hetahetam-panahy’ izany saingy mbola tiako apetraka indray.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/10/25/3967/
 sampan-draharahan'ny ady amin'ny fahantrana : http://www.k5.dion.ne.jp/%7Ehinky/index.html
 tamin'izao fomba fitenenana manaraka izao: http://www.k5.dion.ne.jp/%7Ehinky/090904article.yuasa.html
 ohatra manantena: http://ameblo.jp/shiokawa-office/entry-10369752658.html